အော်တိုကုန်ကုန်ပစ္စည်းများ STOCK | SaleAuto
Call : +81-76-426-0866
Mail : info@trade-jp.net
SaleAuto > အော်တိုနှင့်စက်ယန္တရား AUTO and MACHINERY > အော်တိုကုန်ကုန်ပစ္စည်းများ STOCK
ဂျပန်နိုင်ငံ၏အကြီးမားဆုံးကုန်ပစ္စည်းများဝယ်ယူရရှိနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးထားပါတယ်။ ပုံသေဈေးနှုန်းဖြင့်ကားကိုရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ သင့်အချိန်ဖြုန်းစရာမလိုပါ၊နေ့စဉ်လေလံပွဲများစစ်ဆေးစရာမလိုပါ၊လေလံဆွဲပြီးအတည်ပြုချက်ရယူရန်စောင့်ဆိုင်းစရာမလိုပါ။ ကုန်ပစ္စည်းဝယ်ယူသောစနစ်မှာအလွန်အဆင်ပြေပါသည်။ ကား၏စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်ကိုအလွန်လွယ်ကူစွာတွက်ချက်နိုင်ပြီး ထိုအော်တိုကုန်ပစ္စည်းများသည်အကြီးမားဆုံးအဝေးပြေးလမ်းဆုံများအနီးတွင်တည်ရှိသောကြောင့်ပို့ဆောင်စရိတ်အလွန်သက်သာပါသည်။ တစ်ပါတ်အတွင်းကားဟာပို့ဆောင်ရမယ့်ဆိပ်ကမ်းဆီသို့ လာရောက်ပေးပို့သင့်ပါသည်။
အောက်ဖော်ပြပါကုန်ပစ္စည်းမှာယူခြင်းစနစ်များမှရရှိပါလိမ့်မည်: iauc oneprice, gao oneprice, asnet oneprice
စတော့မှကားများဝယ်ယူရာတွင်သင်လိုချင်သောကားကိုတိတိကျကျရွေးချယ်ဝယ်ယူသင့်ပါသည်။ သင်ကားဝယ်ယူချိန်အထိသင်ဟာနေ့စဉ်လေလံဆွဲခြင်း၊လေလံပွဲစစ်ဆေးခြင်းပြုလုပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သင်လိုချင်သောကားကိုရွေးချယ်ရုံပါပဲ၊ငွေသွင်းပြီးသင့်ကားကိုဝယ်ယူပါ။
* ကျေးဇူးပြု၍ကျွန်ုပ်တို့ထံအီးမေးလ်ပို့ခြင်းဖြင့် ဆက်သွယ်ပြီး သင်၏နောက်ထပ်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသင့်ပါတယ်။
* http://yahoo.trade-jp.net/one?classic တွင်ဝင်ရောက်အသုံးပြုပါ။ ကျေးဇူးပြု၍သင်ဝယ်လိုသောကားကိုရွေးချယ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုဝယ်ယူရန်ညွှန်ကြားပါ။ ကျွန်ုပ်တို့စနစ်ကိုအသုံးပြုပြီးအွန်လိုင်းတွင်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။
* သင်၏၀ယ်ယူမှုကိုအတည်ပြုပြီးသည်နှင့်သင့်ထံသို့ကျသင့်ငွေစာရင်းပို့ပါမယ်။ ကျေးဇူးပြု၍ကျသင့်ငွေပေးချေပြီးငွေကိုလက်ခံရယူသူနာမည်ကိုအကြံပြုပါ။
ကုမ္ပဏီ COMPANY
YAHOO ဂျပန်။ JAPAN!
အစီအစဉ် How to Buy
အော်တိုနှင့်စက်ယန္တရား AUTO and MACHINERY
ကားတဈစီး ဝယျဖို့ BUY CAR
အကြီးစားစက်ယန္တရား HEAVY MACHINERY
ဝယျဖို့ ဘယျလို? HOW TO BUY
သဘောတူ စာချုပ် CONTRACT